बिजुली चोर्दा करेन्ट लागेर २ को मृत्यु जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
बिजुली चोर्दा करेन्ट लागेर २ को मृत्यु
आईतबार १२ फाल्गुण, २०७५
महोत्तरी । चोरी कर्मले महोत्तरीमा २ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बिजुली चोरी गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर उनीहरुको मृत्यु भएको हो । लोहारपट्टी नगरपालिका वडा नं। २ सुखैनियामा करेन्ट लागेर लोहरपट्टी नगरपालिका ३ रमदैया बस्ने ३० वर्षीय भरत यादव र २५ वर्षीय राम ईश्वर यादवको मृत्यु भएको हो ।
बिहीबार राति करेन्ट लागेर घाइते भएका उनीहरुको अञ्चल अस्पताल जनकपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको एसपी इश्वर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लोहारपट्टी नगरपालिका वडा नं. २ सुखैनियास्थित सकल मुखिया बिनको घरमा पास्नीको भोजमा बाजा बजाउनका लागि हुकिङ गरेर बिजुली चोर्न खोज्दा उनीहरुलाई करेन्ट लागेको थियो ।
टनाको थप अनुसन्धान भैरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका डिएसपी खगेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । हुकिङ गरेर बिजुली प्रयोग गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ । तर, यही फागुन ८ गते कैलालीको धनगढीमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाका कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि बिजुली हुकिङ गरेर प्रयोग गरिएको थियो । त्यही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।